Ivontoerana Rosiana Fanohanana Ara-tsaina, Namingavinga sy Nandroaka Pelaka Niantso ny Laharany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2017 5:11 GMT
Alexander Bronshtein, talen'ny ivontoerana fanohanana ara-tsaina “FROG” . Sary: Vkontakte
Izany no tsapan'ny tovolahy iray tamin'ny herinandro lasa, rehefa niantso ny laharan'ilay ivontoerana izy mba haka torohevitra. Pelaka iray, no nilazàn'ilay mpandray telefaona tao amin'ny FROG hoe: “Tsy natao ho an'ny fatritran'olona ity laharana ity,” ary dia notapahan'ilay olona avy hatrany ny fifandraisana.
Tao amin'ny media sosialy, taty aoriana dia hitan'ilay mpiantso i Alexander Bronshtein, talen'ny FROG, ary nampahafantariny azy ny fitondrantena tsy matianina nataon'ny mpiasany. Taorian'ny naharaisany ny fitarainana, dia namaly i Bronshtein “Notenenina ianao fa tsy miaraka miasa amin'ny fatritran'olona [izahay] [pfff] ary avy eo nomena tsodrano hahita izay mendrika indrindra. Inona no henjana ao anatin'io?”
Hatreto, nazava tamin'ilay tovolahy fa tohanan'i Bronshtein ny famingavingàna ataon'ny mpiasany amin'ireo pelaka miantso ny laharan'ny FROG natao hakàna torohevitra. Nilaza mihitsy aza i Bronshtein fa ny hoe “fatrtran'olona” (pedorastiya) dia fomba fiteny azo ekena, raha nanazava tao anaty sehatra iray fifampiresahana ao amin'ny VKontakte fa tsy ara-dalàna ao Rosia “ny fanelezana io tranga io”
Avy eo nentin'ilay tovolahy ny tantarany ho any amin'i Lena Klimova, mpikatroka mafàna fo amin'ny fiarovana ny zon'ireo tanora Rosiana LGBT, malaza noho ny namoronany ny vondrona fanohanana “Ankizy 404″, toerana fifanoroana hevitra ho an'ireo tanora Rosiana LGBT.
Tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook, notsipihan'i Klimova fa milaza ny FROG ao anatin'ny “fanambaràm-pitokisany” hoe misokatra ho an'ny tsirairay ny tolotra omeny. Raha ny marina, milaza ara-bakiteny ny tranonkalan'ilay ivontoerana fa, “Raha malahelo ianao, manirery, ary mijaly, antsoy izahay! Hanampy ny tsirairay izahay!”
Tamin'ny fampitandremana ireo Rosiana LGBT tsy hiantso ny laharan'ny FROG, nozarain'i Klimova ihany koa ireo pikantsarin'ny fifampiresahan'ilay tovolahy tamin'i Bronshtein, fa notakonany ny anaran'ilay tovolahy, nefa navelany ho hita kosa ny anaran'i Bronshtein.
Namaly taminà kabary maherihery setra i Bronshtein, nalefany tao amin'ny Vkontakte, ka tao izy no nitanisa ny fikarohana ara-tsaina fony vanimpotoana Sovietika tamin'ny filazàna fa ny fifanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana dia aretina mila tsaboina. Tany amin'ny 1988 tany ireny “voka-pikarohana” ireny, fony URSS mbola nanameloka ny sodomia, nandefa ny lehilahy ho any am-ponja higadra hatramin'ny valo taona, raha hita fa meloka.
Nozarain'i Bronshtein ihany koa ny rohy mankany amin'ny kaontin'ilay tovolahy ao amin'ny Vkontakte, izay maneho tokoa ny maha-pelaka azy. “Tena tsy mikarakara ireo fatritran'olona izahay ary ity mpiantso ity dia efa nampahafantarina izany, ary notsofina rano hahita ny soa sy ny tsara rehetra. Ankoatran'ny hoe nofafanao [Lena Klimova] ny mombamomba azy noho ny antony izay anao irery, ary ny ahy navelanao. Raha maka pikantsary ianao, dia izy iray manontolo atao. Tsy mila manafina ny anaran'ny namanao ianao,” hoy i Bronshtein nanazava.
Tsy ela dia nanjavona ity lahatsoratra tao amin'ny Vkontakte ity, saingy talohan'izany dia afaka nitahiry azy kosa ireo mpampiasa ary nanely pikantsary vaovao.
Olona iray mpampiasa Vkontakte no afaka nifandray nivantana tamin'i Bronshtein, nandefa hafatra ho azy hilaza fa angamba tsy vaotefy hanome torohevitra izy, raha toa mampiasa fanambaniana rehefa miresaka aminà olona pelaka mangataka fanampiana. Talohan'ny nanakànany ny fandraisany hafatra, nohararaotin'i Bronshtein io ho fotoana iray hanamafisany indray fa ny fanambadiana olona mitovy taovam-pananahana dia “fiviliana” mila tsaboina any amin'ny “mpitsabo saina sy fitondrantena”, fa tsy ny psikology, hoy izy, no sady nampiany hoe “izay manaraka ny fenitra ihany no asa iandraiketan'ny psikology”
Taty anaty media sosialy, ireo Rosiana nahafantatra ity tantara ity dia niady hevitra momba ny hoe manana zo araka ny lalàna ve sa tsia ny FROG handà tsy hanome tolotra ho an'ny pelaka. Ireo izay tsy miombona hevitra aminy dia milaza fa nanao heloka bevava natosiky ny fankahalàna i Bronshtein tamin'ny namoahany ny anaran'ilay tovolahy niantso, tsy araka ny sitrapony.
Na izany na tsy izany, ilay ivontoerana fanomezana torohevitra dia tsy nihataka tamin'ny fandàvana tsy hanome fanampiana ho an'ireo pelaka. Ora maro taorian'ny namborahan'i Lena Klimova ny fomba nandraisan'ny FROG ilay tovolahy pelaka niantso ny laharany, nampakatra lahatsary iray ny pejy Vkotakte an'ilay ivontoerana (jereo etsy ambony) mampiseho an'i Vladimir Poutine tamin'ny 2013 niaro ny fandraràn'i Rosia ny “fampielezankevitra pelaka”, izay nanitrikitrihan'ny filoha fa ilay lalàna dia natao hiarovana ny ankizy tsy ho azon'ny torohay tahaka izany, fa tsy natao kosa hamaizana ny olona pelaka.